सुपारी खाने बानी छ ? सावधान !यस्तो समस्या हुनसक्छ | Rajmarga
काठमाडौं – मुखमा सुपारीको दानाखेलाई चपाउने बानी छ भने सावधान यस्ता खतरानाक रोग निम्त्याउछ सुपारीले । पारम्परिक र सांस्कृतिक हिसाबले सुपारी नेपाली समाजको अभिन्न अंग हो । पाहुनालाई सगुनको रूपमा सुपारी दिएर सम्मान गरिन्छ भने निम्तो गर्न सुपारी चाहिन्छ भन्ने चलन अद्यापि छँदैंछ । पुजाआजामा त सुपारी नभैहुँदैन । तर, यही सुपारी हानिकारक र रोग लगाउने अम्मल पनि हो । अचेल यसको व्यवसायिकता र प्रयोग दिनदिदैं बढ्दै गएको छ । त्यसो हुनुमा यसको अम्मल लगाउने बैगुन मुख्य कारण हो ।
सुपारी तथा सुपारीजन्य पदार्थको सेवनबाट उत्पन्न हुने मुखका समस्यामा दा“त खिईने, स–साना चिरामार्फत् रसभित्र पसेर दा“तको रंग परिवर्तन हुने, दाग बस्ने, टुक्रा परी भाँचिने र खस्रो हुने, खोकी लाग्ने, मुख खोल्न कठीन हुने, पोल्ने, मसला र पीरो खान नसक्ने, गालाको भित्री भागमा एक वा दुवैतिर सेतो–खैरो दाग देखिनेलगायत हुन्छ । त्यसपछि ओरल सबम्युकस फाईब्रोसीस भएर अन्त्यमा मुखको अर्बुद रोगसम्म हुन सक्छ ।
कारण ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के कारणले हुन्छ त्यति स्पष्ट नभएपनि खुर्सानीको अत्यधिक सेवन, फलाम र भिटामिन बी कम्प्लेक्सको कमी, सूर्ति सेवन, प्रतिरोधात्मक शक्तिको कमी, सुपारीजस्ता कारणले भएको मानिन्छ । तर, सुपारी तथा सुपारीजन्य पदार्थको सेवन नै प्रमुख कारण मानिएको छ । सुपारीमा भएका ट्यानीन, फलेभोनाइड तथा कत्थाले कोलाजनलाई नाश हुनबाट रोक्दछ भने अल्कल्वाइडले फाइब्रोब्लाष्टलाई उत्तेजित गरी कोलाजन बन्नमा सहयोग गर्दछ ।
त्यसकारण कोलाजन बढेर मोटो बाक्लो भई म्युकोसाको लचकता घटेर सा-हो र कठोर बन्दछ । कहिलेकाही भने लामो समयसम्म सुपारी खाने मानिसमा पनि यो रोग देखिदैंन भने कहिलेकाही सुपारी खानेमा पनि रोग देखिन्छ । सामान्य तन्तु ओरल म्युकोसालाई उपरोक्त कारणले शरीरको प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई रूपान्तर गरी एरेक्वाईडिन र एरेकोलिन अल्कल्वाईडले डिएनएलाई परिवर्तन गरी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बनाउछ ।
अन्त्यमा, सुपारी प्रसाद तथा सगुनको रुपमा ग्रहण गरेपनि निरन्तर रुपमा सेवन नगरी यसबाट हुने बेफाइदा तथा रोगबाट बच्न जति जरुरी छ, त्यति नै युवापिंढीको भविष्य र जीवनमा नकारात्मक असर पार्ने सुपारीजन्य पदार्थ गुट्खा र पानमसालामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पनि देखिएको छ ।
सुपारीले कसरी पुर्‍याउँछ स्वास्थ्यमा नोक्सान ?
अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने सुपारीको अत्याधिक सेवनले मुखको क्यान्सर गराउँछ । त्यस्तै, अन्ननलीको मेत क्यान्स गराउँछ । त्यस्तै, अत्याधिक मात्रामा सुपारीको प्रयोगले मुखको छाला कडा बनाउनुका साथै दाँतको जरामा समस्या निम्त्याउँछ ।
सुपारीको सेवन र मुटु रोग बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ । अत्याधिक मात्रामा सुपारीको सेवनले मुटु सम्बन्धि जोखिम निम्त्याउनुका साथै माटोपना निम्त्याउने गर्छ ।
निरन्तर रुपमा सुपारी चपाउनाले दातमा समस्या पैदा हुनुका साथै दाँत खिइने गर्छ । त्यस्तै, यसले दातमा सडन हुनुका साथै दातमा खिया लाग्न गर्छ ।
अन्य औषधी तथा हर्वलसित मिसिएको अवस्थामा यसले शरीरमा रसायनिक प्रतिकि्रया जनाउँछ । यसले औषधीको प्रभावकारीतामा समेत र्‍हास ल्याउँछ ।
यसले शरीरमा लत लगाउनुका साथै सुपारीको बानी पार्छ, जुन छोड्न समेत गार्‍हो हुन्छ । त्यसैले चिकित्सकहरु जो कसैलाई सुपारी नखाने सल्लाह दिने गर्छन् ।
Previous post: जबर्जस्ती गर्भपतन गराएको आरोपमा जनप्रतिनिधि पक्राउ
Next post: मन्दिर गएको सपना देख्नु हुन्छ ? कारण यस्तो हुनसक्छ !!!